साइनाई प्रायद्वीपमाथिको खिचातानि - Vishwanews.com
साइनाई प्रायद्वीपमाथिको खिचातानि
कुमार न्यौपाने, न्युयोर्क
अमेरिकीहरु मध्येपनि न्युयोर्कबासीले साइनाई वा माउन्ट साइनाई सुन्ने बित्तिकै एक सुबिधा सम्पन्न अस्पताल भनिहाल्छन । झट्ट सुन्दा माउन्ट फुजी जस्तै लाग्ने यो नाउँ जापानीज हो कि जस्तो पनि लाग्छ । तर इजरायलीहरुमा पनि जुइसहरुले न्युयोर्कमा आफुहरुलाई उपचारको मामलामा तत्कालीन समयको राज्य र समाजले अन्याय गरेको ठानेर स्थापना गरेको अस्पताल हो ‘माउन्ट साइनाई’ । यो त अस्पतालसंग जोडिएको बिषय भयो, तर साइनाई पर्वत र साइनाई प्रायद्घिप बाइबलकालको कथासंग जोडिएको ठाँउ (प्राचिन र हाल इजिप्टको सिमाना भित्र पर्ने सबैभन्दा अग्लो भु­भाग) हो, जहाँ मोसेस गुरुले दश कमाण्डमेन्ट् (मन्त्रहरु) प्राप्त गरेको ठाँउ भनेर बाईबलको कथनले भन्छ, त्यसैले जुइसहरु यो भु­भाग वा पर्वतलाई आफ्नो धर्म र संस्कारसंग जोडिएको पबित्र भूमी मान्दछन् । त्यसैले होला, यो भूभाग भौगोलिक रुपमा इजिप्टको भएतापनि इजराइलीहरुले न्युर्योकमा यो नाँउलाई आफ्नो पहिचान बनाएका छन ।
उत्तर अफ्रिकी मुलुक इजिप्टको एसियामा पर्ने उच्च पर्वतीय भु­भाग साइनाई प्रायद्वीप इजरायलीहरुका लागि धार्मिक आस्था संगसंगै किन राजनीतिक र सामरिक रुपमा महत्वपुर्ण छ भन्ने कुरा अहम हो । प्राचिन इजिप्ट, रोमन, अट्टोमान, बेलायत र इजराइलको कब्जामा रहदै हुदै पुर्ववर्ति मुलुकमै गाभिन पुगेको भूभागको नाउँ किन न्युयोर्कमा र जुईस समाजमा चर्चित छ भनि हेर्दा धर्म र धार्मिक आस्था बलियो देखिन्छ । यस भु­भागलाई थुप्रै मुलुकहरुले सयौं बर्षसम्म कब्जा गरे तर सबैभन्दा कम समय कब्जा गर्ने इजराइलको नै यस नाउँमा किन प्रभुत्व भयो ? पक्कै पनि त्यो थियो धार्मिक आस्था… बाईबल, मोसेस र साईनाइ प्रायद्घिप ।
इजिप्टको नासेरले स्वेज नहरलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि उत्पन्न विवाद र संघर्षमा बेलायत, फ्रान्सलाई नजिकबाट सैनिक सहयोग गर्ने इजरायलको सेनाले ६ दिने युद्घ मै इजिप्टलाई हराई प्रायजसो प्रायद्घिपमा कब्जा गर्छ । प्रायद्घिप पट्टिको नहरको भाग र महत्वपुर्ण भुभाग इजराइलको हातमा गएतापनि इजिप्ट अन्ततः सन्धि मार्फत युद्घमा गुमाएको सम्पुर्ण भूभाग फिर्ता लिन सक्षम हुन्छ । युद्घको तत्काल अन्त्य भएतापनि इजराइल र इजिप्टलाई स्वेज नहर, भु­मध्यसागर र लाल सागरको पानीमा कसरी आफ्नो प्रभुत्व राख्ने भन्ने चाहानाले सधैं पच्छ्याइरहेको देखिन्छ । एकले प्राचिन कालदेखिको भोगको हिसाव निकाल्छ भने अर्कोले हाम्रो धार्मिक पवित्र भूमी भन्छ । बास्तवमा साइनाई प्रायद्घिपको अधिपत्यको मुल कुरा धार्मिक आस्था संगसंगै स्वेज नहर, नहर मार्फत हुने व्यापार र त्यस क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति स्थापीत कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने होड नै हो । इजराइल भु­मध्यसागरलाई कसरी मृतसागरमा जोड्ने र अर्को नयाँ नहर मार्फत अकावाको खाडी हुदै लालसागर छिर्न र हिन्दमहासागरमा आर्लने बाटो खोज्दैछ । यो बाटो भनेको स्वेज नहरको बिकल्प हो जसले त्यस भेगको पानीमा इजिप्टको एकल प्रभुत्वलाई धावा बोल्छ । इजिप्टसंगको इजरायली बेमेलको गुह्य कुरा यसै साइनाई प्रायद्घिपको माउन्ट साइनाई क्षेत्र (जुन स्वेजनहरसंग पनि जोडिन्छ) र यस क्षेत्रमा रहेको खनिजहरु पनि हुन ।
विश्वमा विगतका केही सताब्दी जमिनको लागि संर्घष भयो, त्यसपछि सुन लगायतका धातुहरु, तेल, प्राकृतिक ग्याँस (हालसम्म कायमै छ) र केही दशकदेखिको संघर्ष सामुन्द्रिक पानी, नहर (जलमार्ग) हरुमा भयो, हुदैछ र जलवायु परिवर्तनसंगै पानीको चक्रीय प्रणालीमा आएको उतारचढावले स्वच्छ पिउने पानी नै अबको चरम संर्घषको युग हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा पृथ्वीको भु­भागको दुइतिहाई भागमा पानी भएतापनि बिभिन्न तहमा पानी मै यत्रो संर्घष भइरहेको छ र हुदैछ ।
यी त भए प्रायद्घिपमा प्रत्यक्ष देखिएका र दावी गरीएका देशहरुको खरो स्थिति र कारणहरु । तर साईनाइ प्रायद्घिपमा पछिल्लो समय आँखा गाड्ने तेश्रो पक्ष पनि छ, त्यो हो आई एस आई, इस्लामिक ब्रदरहुड आदि । एकातिर इजिप्टको मुख्य भु­भागबाट स्वेज नहरले छुट्ट्याएको यस प्रायद्घिपसंग इजिप्टको सस्ंथापन पक्षको विगतको कमजोर उपस्थिति र प्रायद्घिप बिवादपछिको शान्ती सम्झौता अनुसार सन्तुलनमा आएको इजरायल एक हिसावले थन्किएको मौका छोपि विश्वमा इस्लामको बलियो धार्मिक राज्य बनाउन उग्ररुपमा आइरहेको आई एस आईको इराक, अफगानिस्तान र सिरीयामाथिको प्रयासपछि यस त्रिकोणीय भुभागमा आँखा गडेको छ । यसै मौकामा यस त्रिभुज आकारको भूमीमा त्रिपक्षीय द्घन्द देख्न सकिन्छ । इस्लामिक उग्रवादीको उपद्रो र हस्तक्षेपलाई तह लगाउन इजिप्ट उक्त प्रायद्घिपमा सैनिक संख्या र ट्याङ्करहरु थप्न खोज्छ तर स् गर्न इजरायलको चर्को बिरोध खप्नु परिरहेको छ । साइनाई प्रायद्घिपको बिवाद समाधानको लागि गरिएको शान्ति सम्झौताले इजिप्टलाई त्यहाँ थप सैन्यकरण गर्न रोक्छ । तर यी दुई देशको बिवाद र सन्धिको प्रावधानहरुले गर्दा आई एस आईले बीचमा खेल्दै आफ्नो प्रभाव बढाउदै लगेको देखिन्छ । स्पष्टरुपमा भन्दा सन्धिले दुबै देशहरुलाई सैनिक गतिविधि गर्न रोकेको छ ।
नेपाल र भारतको बिषयवस्तु दुरुस्तै नभएपनि आफ्नो भूभाग प्रतिको बेवास्ता र कमजोर उपस्थितिले कालापानीको बिषय चोटिलो बन्दै गएको छ । देशको छिमेकीहरुको चरित्रहरुको कुरा गर्दा यथेस्ठ प्रमाण हुदाहुँदै पनि नेपाल कालापानीको भूमीबाट पाखा लागिरहेको अवस्था देखिएको छ । कुनै समयको अफ्ठ्यारो परिस्थिति बुझि मित्र ठानेर आफ्नो भूमी नै अरुलाई दिंदा अथवा राष्ट्रको सिमानासंग खेलाची गर्दाको पाठ नेपालले कालापानीबाट सिक्दैछ । चीनसंगको युद्घ, नेपालसंगको मित्रता तर आज चीनसंगको सहकार्यमा उ बेलाको मित्र नेपालको सहयोगलाई दुत्कार्दै त्यही मित्रको भूमी हस्तक्षेप गर्नपछि नपर्ने छिमेकीहरु खोज्न टाठा जानै पर्दैन । यस्तै यस्तै घटनाहरु र बिवादहरुले विश्वका अधिकांस देशहरुबीच बैमनस्यता कायमै छ । युरोप, अमेरिकीहरु भने केही दशकदेखि भूभाग हडप्ने युद्घभन्दा अर्थको लडाईं लड्न उद्दत छ । आजको बिश्वमा जोसंग पैसा छ, उसैको प्रभुत्व देखिन्छ । मध्यपुर्व, दक्षिण एसियाका देशहरु भने अझैपनि भु­भागलाई महत्व दिइरहेका छन । विश्वको दोश्रो आर्थिक शक्ति चीनको पहिलो प्राथमिकता अर्थ नै भएतापनि भारतसंगको भुमी बिवाद भने छिट्टै टुङ्गयाउने पक्षमा देखिदैन । तिव्वत, हङ्गकङ्ग, मकाउ हुदै ताइवानसंगै दक्षिण चीन सागर र बिस्तारै हिन्दमहासागरमा पुगेको चीन आर्थिक, सामाजिक र सामरिक हिसावले सबल बन्दै सबै आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छ ।
मानव आफुलाई जैविक प्राणी हुँ भन्ने सत्यलाई मान्न तयार छैन जस्तो लाग्दैछ । आफुलाई सच्याई, आफैद्वारा सिर्जीत प्रदुषण रोक्न र जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पार्ने पिउने पानीको चरम समस्यासंग जुध्नुको सट्टा मंगल र शनिग्रहतिर पानी खोज्दै भौतारिंदै हिंड्नु मुर्खता सिवाय के होला र ?
न्युयोर्कको माउन्ट साइनाई अस्पतालदेखि साइनाई प्रायद्घिप हुदै भारत, पाकिस्तानको कश्मीर र चिनको उइघुर इलाकाहरु पुग्दासम्मका बिषयहरु कतै न कतैबाट धर्म संगसंगै जोडिएको छ । हाल मेरो छिमेकमा रहेको माउन्ट साइनाई अस्पताल जुन परिस्थितिमा स्थापना भएतापनि आज गोरो, कालो, यो जात, त्यो धर्म नभनि मानवको उपचारमा तल्लिन छ, त्यसरी नै साइनाई प्रायद्वीप लगायतका तमाम सिमानाहरुको मामलो मिलोस । बिभिन्न धर्महरुको उद्गम उद्देश्यहरुलाई हेर्ने हो भने सबै स्वच्छ र चोखो पाउछौं । धर्म त एक उत्तम संस्कार न हो, यसलाई धमिल्याइ आफ्नो स्वार्थसिद्घ गर्नेहरु प्रति सबै सधैं सजग रहौं ।